कहिल्यै भुल्न नसकिने मेरो आँगनको त्यो दिन
बिहीबार, फागुन ६, २०७७ रवि किरण आचार्य
इतिहास विगतको साक्षी हो । दिनहरु आउँछन् जान्छन् यो प्रकृतिको सर्वमान्य नियम हो । तर, कुनै दिन त्यस्ता पनि आउँछन् जुन बिर्सनै सकिँदैन । बिसं २०४६ साल बैशाख २१ को त्यो कु्रर दिनको धब्बा मेरो मानसपटलमा उद्देलित भैरहन्छ । पूरै समाज र राष्ट्रको लागि केही गर्न चाहने होनहार योद्धाको सपनालाई कुठाराघात गर्ने त्यो दिन कुनै मानेमा क्षम्य हुन सक्तैन ।
त्यो बेला संस्कारी समाज थियो । वर्गीय नाता अत्यन्तै घनीभूत थियो । हाम्रो संस्कार अनि वर्ग निम्न मध्यम खालको थियो । समाजमा हाम्रो परिवार सबैका लागि उदाहरण र नमुना थियो र अद्यापि त्यो छाप सबैका लागि कायमै छ । मुठीभर मान्छेहरुले देशलाई चलाइरहेका थिए । मौलिक हक र स्वतन्त्रताहरु कुण्ठित थिए । वर्ग विभेदले उन्माद र उन्मक्त मतियारहरु सर्बसत्ताबादको भर्याङ्ग चढी निहत्था कर्मशील युवाहरुको आवाजलाई दबाउन सधैंजसो राज्यको बल प्रयोग गरिरहन्थे । मूलभुतरुपमा शासन ब्यबस्थाको सवालमा संसारको कुनै पनि देश लामो समयसम्म टिकेको छैन । त्यतिबेला पञ्चायती सर्बसत्ताबाद हावी थियो । प्रगतिशील र परिवर्तन चाहने युवा पंक्तिहरु राज्यसत्ताको बिरोधमा दिनरात नभनी खटिरहेका थिए । भूमिगतरुपमा संगठनका क्रियाकलापहरु भइरहन्थे ।
कुनै संकेत पाइएको थिएन त्यतिन्जेलसम्म त्यो दिनको । त्यस्तै कक्षा आठ हुनुपर्छ मैले स्थानीय अमर मावि उरहरीमा अध्ययन गर्दथे । त्यो दिन आँगनमा गहुँबाली स्याहारसुसारको काम भैरहेको थियो । एक्कासी डिएसपीको नेतृत्वमा दुई हुल पुलिसका गाडि खुल्ला आँगनमै छिरे । त्यतिबेला कच्ची घर भएपनि आकारमा ठूलै थियो । पर्याप्त झ्यालहरु थिए । झ्यालबाट भाग्न सक्ने आँकलन गरेर होला साइँल दाई (बलदेब आचार्य ) लाई पकड्न भनेर आएका पुलिसका हुलका हुल जत्थाले बाक्लो गरी घर घेरे । बलदेव जी कता हुनुहन्छ ? डिएसपीले सोध्दै थिए । हामीले प्रति उत्तर दिन पाउँदा नपाउँदै दाई कतै बाहिरबाट घरमा आइपुग्नुभयो ।
उ बेला अहिले जस्तो मोबाइल फोनकोे सुविधा थिएन, दाईलाई भगाउन सक्ने कुनै उपाय रच्ने बुद्धि त्यो बेला मनमा आउनै सकेन । उतैबाट पुलिसले भम्के घर भएका संगठनका नेता सेवकराम भण्डारीलाई पकडेर हाम्रो घर सिकाउन ल्याएको झल्झली याद आउँदछ । आमालाई तपाईंको छोरालाई लिन आएको आमा सोधपुछ गर्नुछ भनेर पुलिसले भनेको सम्झन्छु अहिले पनि म । त्यति भनेपछि आमा रुन थाल्नुभयो । शासन ब्यबस्थाको सैद्धान्तिक पाटो नबुझे पनि ब्यवहारिक रिहर्सल राम्रैसँग ख्याल राख्नुहुन्थ्यो आमा उतिबेला । हामी सानै थियौं, ब्यबहारमा अनि उमेरमा पनि ।
गाउँभरीका मानिसहरु जमघट भएका थिए । तर, परिस्थितिको ठोस बिश्लेषण गरी शासन ब्यबस्थाको बिरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्न सक्ने हिम्मत कसैमा थिएन । पुलिसले मुचुल्का उठायो । सायद मुठिभरका प्रतिगामीहरु हाँस्दै गरेको त्यो परिदृश्य मेरो मानसपटलमा ताजै छ । एक छिनपछि पुलिसले दाईलाई आफ्नो गाडीमा हालेर लग्यो । अब हाम्रो घरमा सन्नाटा छायो । आमा रातभरी सुत्न सक्नु भएन उसैमाथि हामी पनि बेचैन थियौं । अरु दाईहरु कता कता हुनुहुन्थ्यो कुन्नि ? सायद ठुल्दाई (ओम प्रकाश आचार्य) ले राप्ती विद्या मन्दिर तुल्सीपुरमा शिक्षण कार्य गर्नुहुन्थ्यो । माइल दाई (लक्ष्मण आचार्य) महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस घोराहीतिर अध्ययनमा हुनुहुन्थ्यो होला । अरु दाजुभाई सानै जस्तो लाग्दथ्यो । आमाको मन न हो, सायद आमाले विभिन्न थरी मान्छेलाई दाईलाई छुटाउन गुहार गर्नुभयो होला तर दाईले तत्कालीन मुख्य प्रशासक मण्डले प्रबृतिका अञ्चलाधीश जगदिश खड्का समक्ष आत्मसर्मपण गर्नुभएन बरु जेल सजाय भोग्न तयार हुनुभयो ।
दिनहरु बित्दै गए । ब्यबस्था इतरका मान्छे भएकाले पहुँचका कुरा टाढै थिए । दाईलाई संघसंस्था सम्बन्धि उद्योग गर्ने र राजकाज गरी दुई किसिमका मुद्दा चलाइयो । स्मरण रहोस्, त्यतिबेला नेपालमा तीब्रतर रुपमा बहुदलीय ब्यबस्था प्राप्तिका लागि काँग्रेस तथा बाम घटकहरुको संयुक्त आन्दोलन भैरहेको थियो । नेपाली काँग्रेसका नेता गणेशमान सिँह र बाममोर्चाको तर्फबाट सहाना प्रधानले संयुक्त जनआन्दोलनको कमाण्ड गरिरहेका थिए । दाङ्गका जेलहरुमा बलदेब आचार्य, अशोक चौधरी, शिवराज गौतम, शालिकराम रजौरे, खुम बहादुर खड्का लगायतका बहुदल पक्षीय नेताहरु कोचिएर राखेका थिए ।
२०४५/०४६ ताका बल्देब दाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मालेको भगिनी संगठन अनेरास्वबियु पाँचौको दाङ्ग जिल्ला उपाध्यक्ष भएर जिम्मेवारी साथ काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठको पालामा भारतले नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो । उक्त समयमा भारतको मेघालय राज्यबाट नेपालीहरुलाई लखेट्ने कार्यका बिरुद्ध नेपालमा आन्दोलनको जेहाद छेडिएको थियो । उक्त आन्दोलनमा दाईले दाङ्ग जिल्लाको संयोजकको हैसियतमा कमाण्ड सम्हाल्नुभएको थियो । तत्कालीन समयमा अनेरास्ववियु पाँचौको राष्ट्रिय परिषद् सदस्यसम्मको जिम्मेवारी बहन गर्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँले पार्टीको जिल्ला कमिटि लगायत विभिन्न राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवम् शैक्षिक संघसंगठनमा रही काम गर्दै आउनुभएको छ । बल्देब दाई राजनीतिशास्त्र बिषयमा स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ ।
ठुल्दाई (ओम प्रकाश आचार्य ) ले माध्यामिक स्तरको शिक्षा माबि भोजपर दाङ्गबाट लिनुभएको थियो । २०३५/०३६ सालको जनमत संग्रह ताका नै बिद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय भएर लाग्नुभएको थियो । बिसं २०४१ सालतिर नेपालगन्ज बहुमुखी क्याम्पसमा आइएस्सी पढ्दाको समयमा उतिबेला पार्टीहरु भुमिगत नै थिए । त्यस समयमा तत्कालीन नेकपा मालको संयोजक झलनाथ खनाल भए जस्तो लाग्छ । पञ्चायतको बिरुद्धमा आवाज बुलन्द गरकै कारण ओम प्रकाश आचार्य, प्रकाश ज्वाला, उर्बादत्त पन्त लगायतका बिद्यार्थी नेताहरुलाई हिरासतमा लिएको थियो ।
अध्ययनको शिलशिलामा अमृत साइन्स कलेज (अस्कल ) मा विएस्सी पढ्दा अनेरास्वबियुको प्रारम्भिक कमिटिमा बसेर काम गर्नुभएको थियो । नेता गोकर्ण बिष्टको संयोजकत्वमा संचालित उपत्यका चुनाव परिचालन कमिटिमा बसेर पनि जिम्मेवारी बहन गर्नुभएको थियो । स्मरण रहोस् त्यसताका अनेरास्वबियुको अध्यक्ष तुल बहादर गुरुङ्ग थिए । भौतिक रशायन शास्त्र बिषयमा स्नातकोत्तर कोर्स पूूरा गरी थाइल्याण्डबाट वातावरणीय बिष बिज्ञानमा मास्टर्स गर्नुभएका ओमप्रकाश दाईले हाल बिधि बिज्ञान प्रयोगशालामा प्रमुख बैज्ञानिकको रुपमा काम गर्दै आउनुभएको छ ।
पार्टी र पार्टी संगठन भन्दा बाहिरको बिषयबस्तुमा खासै ध्यान नराख्ने माइल दाई (लक्ष्मण आचार्य ) ले शिक्षण कार्यलाई थाँती राखेर शासन ब्यबस्थामा अब्बल परिबर्तनका माध्यमबाट सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ राजनैतिकरुपमा अग्रपंक्तिमा रहिरहनु भयो । सत्ताको स्वाद भन्दा संगठन निर्माणको काममा विश्वास गर्ने नेताको रुपमां हामीले बुझेका छौं । बिसं. २०४७ सालमा पार्टीको संगठित सदस्यता लिएर निरन्तर काम गर्दै आउनुभएको छ । बिसं. २०५३/०५४ सालतिर अनेरास्वबियुको राप्ती अञ्चल संयोजकको हैसियतमा जिम्मेवारी लिनुभएको थियो । त्यसपछि पनि संगठनका विभिन्न तह र तप्कामा रहेर काम गर्दै आउनुभयो ।
बिसं. २०५५ सालतिर अनेरास्वबियुको केन्द्रिय कोषाध्यक्षको रुपमा अनुशासित जिम्मेवारी बहन गनुभयो । त्यसपछि पार्टीको निर्देशन र सल्लाहलाई अनुशासनको रुपमा लिई बिद्यार्थी संगठनबाट पार्टीको कामकाज गर्ने गरी बिसं. २०५९ सालबाट दाङ्ग जिल्लाको उपसचिबको रुपमा दुई कार्यकाल जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । बिसं. २०६६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको दाङ्ग जिल्लाको अध्यक्ष भएर सारभूूतरुपमा आफ्नो कौशल देखाउनुभएको थियो । बिषम् परिस्थितिमा लक्ष्मण आचार्यको खोजी तत्कालीन समयमा मात्र नभई अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिकता भएको महसुस सर्बत्र गरिएको सुनिन्छ । पार्टीको काम र जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिने शिलशिलामा बिसं. २०६९ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको राप्ती अंचल कार्यालय सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । बिसं. २०७५ सालपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रदेश कमिटिको सदस्य भएर काम गर्दै आउनुभएकोछ । गणित र अंग्रेजी बिषमा अब्बल मानिने लक्ष्मण दाईले राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ ।
संस्कारले सिकाएको पाठ बंशानुगत जस्तै थियो । बुवा आमाको खासै आम्दानीको श्रोत नभएपनि कृषिको माध्यमबाट आफ्ना सन्ततिहरुको पालनपोषणका अतिरिक्त शिक्षादिक्षामा हरदम चासो राखिरहनुहुन्थ्यो । आज बुवा आमा हामी माझ हुनुहन्न तर सलाम छ उहाँको त्यो संघर्षमय जीवनको, सधैं पथप्रर्दशकको रुपमा रहिरहनुहुने उहाँहरुको योगदान चिरपर्यन्त रहिरहने छ । उहाँहरुको स्मरणका खातिर आज यी हरफहरु कोर्न बाध्य छु म । समाज र सिंगो राष्ट्रका खातिर प्रत्यक्ष परोक्षरुपमा योगदान दिएर जानुभएको छ ।
काइँल दाई (निमकान्त आचार्य )ले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस दाङ्गमा अध्ययन गर्ने क्रममा अनेरास्वबियुमा संलग्न रही क्रियाकलाप गर्नुभएको थियो । दिनरात नभनी संगठन र पार्टीलाई मजबुत बनाइराख्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ कर्ममा बिश्वास राख्ने उहाँको बानी रहेको छ । हाल उहाँ सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत् सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय दाङ्गमा अधिकृतको रुपमा काम गर्दै आउनुभएको छ ।
सबैको कान्छो भाई (राजु आचार्य ) ले अमृत साइन्स कलेजमा आइएस्सी पढ्दादेखि नै अनेरास्वबियुको संगठनमा रही काम गरेको इतिहास छ । पुल्चोक इन्जिनियरिङ्ग कलेजबाट विई गरेका उनले कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट बिषयमा स्नातकोत्तर पूूरा गरेका छन् । २०६८ सालमा नेपाल सरकारको उपसचिवमा नाम निकाल्न सफल भएका उनी हाल बृहद् दाङ्ग उपत्यका सिचाई आयोजना को आयोजना प्रमुखको रुपमा रही आएका छन् । मेरो बारेमा म आफैंलाई केही भन्नु छैन ।
(नोट-यो लेख राजनैतिक नभई नितान्त घरायसी संस्मरणका लागि मात्र लेखिएको हो )
आचार्य उरहरी दाङ्गका स्थायी बासिन्दा हुन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन ६, २०७७, १८:३८:००
बाल्यकालको त्यो चलचित्र मोह
कोष जुटाउने–चिया उत्सव
राजनीतिक विकृतिको जिम्मेवार सरकार